२२ विघामा फैलिएको झुटकीको ऐतिहासिक चन्द्रादेवी पोखरी, ग्रामिण पर्यटनको प्रबल सम्भावना | Online Saptari
Home / २२ विघामा फैलिएको झुटकीको ऐतिहासिक चन्द्रादेवी पोखरी, ग्रामिण पर्यटनको प्रबल सम्भावना
सप्तरी जिल्लाको झुटकी गाउँ विकास समितिको वडा नम्वर–४ मा अवस्थित छ चन्द्रादेवी पोखरी । करिव २२ विघा क्षेत्रफलमा फैलिएको यस ऐतिहासिक पोखरीलाई स्थानीय वासिन्दा चन्द्रादेवी, चन्द्रदेवी, झुटकी पोखरी आदीको नामले चिनिन्छ । सप्तरी सदरमुकाम राजविराज नगरपालिकादेखि करिब १५ किलोमीटर पश्चिम–दक्षिणमा यो पोखरी बस्तीभन्दा बाहिर अवस्थित छ ।
जतिबेला खानेपानीका लागि इनार, ट्युवेलको उपलब्धता थिएन, त्यतिबेला यसक्षेत्रका वासिन्दाले चन्द्रादेवी पोखरीकै पानीले खाना पकाउन तथा पिउने समेत गर्दथे । बदलिँदो परिवेशमा यो आस्था अझैं पनि कायमै रहेको छ । यस क्षेत्रका वस्तीहरूमा बाह्रै महिना कम से कम एकलोटा पानी हालेर खाना पकाउने गरिँदैआए पनि सिरुवा अर्थात जुडशीतल पर्वका दिन यसको अनिवार्यता रहेको छ। यदि यस्तो गरिएन भने अनिष्ट हुने जनविश्वास रहेको छ । यस अतिरिक्त भोजभत्तेर तथा विशेष अवसरहरूमा चन्द्रदेवी पोखरीको पानीको प्रयोगले शुभ तथा सफल हुने विश्वासकासाथ पोखरीको पानीको अनिवार्यता रहने गर्दछ । नयाँ वर्षको अवसरमा माता चन्द्रादेवीको प्राङ्गण ठूलो मेला लाग्ने गर्दछ ।
पोखरीमा सन्दुक (सामान राख्नका लागि प्रयोग हुने ठूलो बाकस) तथा राँगा निस्किने गरेको स्थानीय बुढापाकाहरूको कथन छ । उनीहरूका अनुसार विशाल पोखरीमा एक्लै प्रवेश गर्ने हिम्मत कसैले गदैन । परापूर्वकालदेखिको अति प्राचीन मानिएको यस पोखरीमा वि.सं. २०५० सालमा सप्तरीको जगमोहन गाउँबाट आएका धामी तनुकलाल चौधरीले देउता खेल्ने क्रममा पोखरीबाट एउटा पत्थर फेला पारेका थिए । उक्त पत्थरलाई पोखरीको डिलमा राखेर स्थानीयवासिन्दाहरूले चन्द्रादेवीको नामबाट पूजा–आजा गर्न थालेका छन् । मन्दिरमा दैनिक पूजा सम्पादनको जिम्मेवारी स्थानीय वयोवृद्ध बच्चालाल यादवले सम्हाल्दैआएका छन् ।
वि.सं. २०६६ का तत्कालीन शिक्षामन्त्री एवम् सांसद रेणु यादवको संसदीय विकास कोषको रकमबाट पोखरीको पश्चिमतर्फको डिलमा वि.सं. २०६६ साल साउन ४ गते मन्दिर निर्माण गरियो । यद्यपि उक्त मन्दिरको निर्माणकार्य पर्याप्त छैन । यसैगरी पूर्वतर्फ पक्की देवघर निर्माण गरिएको छ । जहाँ प्रत्येक वर्ष सिरूवा अर्थात नयाँवर्षका अवसरमा मूर्ति बनाइन्छ । उक्त अवसरमा दुई दिनसम्म भव्य मेला लाग्ने गर्दछ ।
सदरमुकामको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको यस ग्रामिण भेगका जनताको आस्था स्थलको रुपमा रहेको चन्द्रादेवी स्थलको विकास भए यसक्षेत्रका वासिन्दाकालागि जीवनस्तर उकास्नमा मद्दत मिल्नेमा आशावादी छ । ग्रामिण पर्यटनको प्रबल सम्भावना रहेकोले यस स्थलमा आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग हुने निश्चित छ ।
श्रोतः प्रथम पटक न्युज टुडेमा प्रकाशित